.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: မြန်မာသီချင်းစာသား ဝဘ်ဆိုဒ်များ
Flash Song တစ်ပုဒ်ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်မယ့် သီချင်းရဲ့ စာသားတွေကို YouTube က ဗွီဒီယိုတွေမှာ
သွားကြည့်ပြီးတော့ ကူးရေးလို့လည်း ရပါတယ်။ စာသားပါတဲ့ သီချင်းတွေက များပါတယ်။ တစ်ချို့ ရှာလို့မရတဲ့
သီချင်းတွေကျတော့ အသံကို နားထောင်ပြီးတော့ ရေးရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေကျတော့ သီချင်း
စာသားတွေ ၊ စာလုံးပေါင်းတွေ မှားနေကြတာ များတယ်။ ပြီးတော့ ရေးရတာလည်း အချိန်တော်တော်ကြာပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်ရှာတွေ့တဲ့ မြန်မာသီချင်းစာသားတွေ တင်ပေးနေတဲ့ ဆိုဒ်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
[ 1 ] http://www.mmlyrics.com/
ဒီဆိုဒ်လေးက သီချင်းစာသားတွေကို Guitar Chords တွေနဲ့ရော တင်ပေးထားတဲ့အတွက် ဖလပ်သီချင်းလုပ်နေတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အသုံးဝင်မှာ ဖြစ်သလို Guitar တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
အငဲ ၊ ဗဒင် ၊ ဒိုးလုံး ၊ ထူးအိမ်သင် ၊ ခင်မောင်တိုး ၊ ခင်ဝမ်း ၊ လေးဖြူ ၊ မဒီ ၊ မာရဇ္ဖ ၊ မျိုးကြီး ၊ မျိုးကျော့မြိုင် စတဲ့
အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ခုခေတ် အဆိုတော်တွေတော့ တင်ထားတာ သိပ်မရှိပါဘူး။
[2] http://mmlyric.blogspot.com/
ဒီဆိုဒ်လေးကို ကျွန်တော် တော်တော်လေးကို သဘောကျတယ်။ သူက သီချင်းစာသားတွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေလို
ပုံတွေမှာ စာရေးထားတာမဟုတ်ပဲ စာသားတွေကို ရိုက်တင်ပေးထားတာဆိုတော့ Flash Song လုပ်ရင် ကော်ပီကူးပြီး
ထည့်လိုက်ရုံပဲ။ အဆိုတော် 220+ ရဲ့ မြန်မာသီချင်းစာသားသီးသန့် (1300++) ပုဒ် တင်ထားပါတယ် တဲ့။ အဲဒီတော့
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ဒီဆိုဒ်လေးက တော်တော်လေးကို အသုံးဝင်မှာပါ။ တစ်ခြားသီချင်းစာသားဆိုဒ်လင့်တွေရော
တင်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့သီချင်းက သူ့ဆိုဒ်မှာ မရှိရင် ထပ်ပြီး ရှာလို့ရတာပေါ့။
[3] http://lyrics.mtvmyanmar.net/
http://www.mtvmyanmar.net/ ရဲ့ ဆိုဒ်ခွဲတစ်ခုပါပဲ။ မြန်မာသီချင်းအသစ်တွေရဲ့ စာသားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ပြီးတော့ မြန်မာ Mp3 သီချင်းတွေကို အသစ်ထွက်တိုင်း တင်ပေးနေသလို အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်ဗျာ။
သီချင်း Album လိုက်တွေရော ၊ အဆိုတော်တွေရဲ့ Song Collection တွေရော အစုံဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ။
[4] http://myanmarguitarchords.wordpress.com/
ဒီဆိုဒ်မှာလည်း အဆိုတော် တော်တော်များများရဲ့ သီချင်းစာသားတွေ တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ Album လိုက်ရော ၊
တစ်ပုဒ်ချင်းစီ စာသားတွေရော တော်တော်လေးကို စုံပါတယ်။ ဟိုအရင်က သီချင်းတွေရော ခုနောက်အသစ်ထွက်တဲ့
သီချင်းတွေပါ ရှိပါတယ်။ Guitar Chords တွေရော ပါတာဆိုတော့ Guitar တီးတဲ့လူတွေအတွက်ရော အဆင်ပြေမှာပါ။
ကဲ အဲလောက်ဆို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းရဲ့ စာသားတွေ ရှာလို့ ရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Posted by Thurainlin at 13:42
Labels: Guitar Chords, Song Lyics, Website